Date My Pet » 5 Zavatra no Hahafantaranao Efa hatramin'ireo 50 Matoatoa va ny Grey
5 Zavatra no Hahafantaranao Efa hatramin'ireo 50 Matoatoa va ny Grey
Nandre ny dimam-polo matoatoa va no ao Grey? Raha ny saritaka rehetra misy ifandraisany amin'ny olombelona ny faniriana ara-nofo sy ny tsy manam-paharoa sy ny maditra ny fomba hahatanteraka izany, raha ny marina dia misy heviny lalina kokoa. Afaka izay azo atao? Raha ny marina, eny. Ity boky ity dia maneho faniriana, mahasarika, sy ny tantaram-pitiavana amin'ny alalan'ny olombelona fitiavana psikolojia. Raha ny tena izy, tena azo ampiasaina ho toy ny mampiaraka baiboly. Te hihaino azy? Vakio eo mba hahita ny fomba isan-karazany nisy dimam-polo ny Grey matoatoa va no afaka mampianatra anao ny hampiaraka sy ny fifandraisana.
Lesona #1: Single saina Fitandremana
Christian, toetra amam-panahy ny tena lehilahy, te Anastasia, ny vehivavy maherifo. Dia manao ny fikasana tena mazava. Ny sainy sy ny firaisana ara-nofo tsy dissipate hery rehefa ny vehivavy tsara tarehy hafa miditra ny sary. Ny hany mifantoka ao Anastasia sy Anastasia ihany.
Io no tena tsara toaka ny vehivavy maro toy ny fiaraha-monina amin'izao fotoana izao indrindra fa izany dia azo ekena ho an'ny olona mba hanome manjavozavo liana amin'ny vehivavy iray. Manome ny daty Hofoanany tanteraka fialam-boly ny saina sy manome fifandraisana feno maso dia hanampy ny kokoa ny fifandraisana sy ny mampiseho fa tena ao amin'ny fotoana.
Lesona #2: Noroahina sy Intentionality
Foana amin'ny fanaraha-maso ny tenany, Manapa-kevitra ny Kristianina sy ny fampiasam-bola fotoana ho fampitomboana ny ezaka isan-karazany ny fahaiza-manao sy fahaiza-manao. Izy foana koa mitady fomba fanamby sy hanatsara ny tenany ho toy ny olona, tahaka Anastasia no rehefa izy no mamarana ny resadresaka amin'ny Kristianina na dia sarotra dia.
Na dia toa tsy ho vita, misy lehilahy sy vehivavy avy tao izay mahomby, manan-tsaina, pihetseham-po sy ara-batana ary mety. Amin'ny alalan'ny fiainana ny tanjona ny fiainana amin'ny alalan'ny fivoarana sy ny zava-tsarotra isan'andro, Afaka ny ho tonga ianao ny tena tsara indrindra izay mitarika mankany iniana hisarihana mpiara-miasa mitovy.
Lesona #3: Fahavononana ho marefo
Fananana fiainana feno fanararaotana sy ny ratram-po ny Kristianina nahatonga hitondra ny zava-drehetra tao an-tanana sy hifantoka amin'ny nifandimby. Raha miseho izy tamin'ny voalohany mikatona intsony, Ny toetra kristiana lasa mahatehotia rehefa miadana mamela ny fihetseham-pony Anastasia ho izao tontolo izao ary mamela azy hanasitrana azy.
Anastasia, raha tsy fananan-tsiny sy feno tena nahatsiaro tena, manapa-kevitra fa raha ny marina izy no te Kristianina. Ary raha tanteraka ny izao tontolo izao dia tsy fantatra sy ny vaovao ho azy, dia mamihina azy sy ny fomba fiainany.
Noho ny fiaraha-monina sy ny hevitra hoe maneho fihetseham-po dia midika fahalemena, izany no tsy nankasitraka ny ny mampiseho azy ireo. Fa amin'ny zava-misy, raha ny marina mampiseho fihetseham-po iray amin'ireo zavatra mafy indrindra hanao. Ary namela olona iray hafa izay tena miahy sy matoky hahita ireo fihetseham-po sy ny fanajana dia manome fahafahana ny fifandraisana mba handalina.
Lesona #4: Fanapahan-kevitra
Fantatry ny Kristianina hoe iza izy ary inona no tiany avy ny fiainana amin'ny alalan'ny miaina mifanaraka amin'ny fitsipika ambony ary satria tena fantany ny tenany. Rehefa manapa-kevitra fa te Anastasia, izany raha ny marina dia midika hoe zavatra.
Ny fanaovana fanapahan-kevitra hentitra, ho entanim-pitiavana, ary mampiseho azy io, mitarika ny daty, ankoatra ny proactively miresaka amin'ny namanao manampy ny hampisy ny fikasana mafy. Dia tsara foana ny mahafantatra fa naniry fotsiny ianao ary naniry.
Lesona #5: Ny fitiavana, Fitiavana, ary Unapologetic Sexual Desire
Predictability ny fahafatesana ara-nofo dia ny faniriana. Rehefa tsy Kristianina spanking, kapoka, na famatorana Anastasia ny, izy no mihazona, nisangy, ary nanoroka azy. Christian Mahery, malefaka, tia ady, sy ny mamy rehetra raha maniry unapologetically Anastasia. Ary kosa, Anastasia mianatra ho tia sy mitady mafy ny sainy sy ny tsy voafehy mila azy.
Ary ny fanandramana ara-nofo trandrahana dia hanampy kokoa ny fifandraisanareo. Be Fitiavana, complimenting, ary te ho sambatra ny namanao mampiseho fa tena miahy anao. Ny fanalahidy dia ny mampiseho fa Hianao dia mpiara-miasa tsara satria te-ho.
Learnings avy nisy dimam-polo ireo matoatoa va ny Grey dia hanampy anao mba hisarihana ny nofy mpiara-miasa na efa miroborobo kokoa ny fifandraisana.
No Izy Misangy ianao? Jereo Out Fa ireo famantarana!
Inona no ny Pets Momba anao
10 First Date Outfit Tips ho Men